Zlatan Ibrahimovic oo taageero u noqday Lionel Messi. - Caasimada Online
Home Warar Zlatan Ibrahimovic oo taageero u noqday Lionel Messi.
Zlatan Ibrahimovic oo taageero u noqday Lionel Messi.
Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay inuu Lionel Messi u qalmo inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’Or, xittaa hadii uu ku guuleystay sedax jeer hada ka hor.
Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa ugu cad cad inay kusoo baxaan kaalmaha hore ee abaal marinta, laakiin Ibrahimovic ayaa aaminsan inuu Kabtanka Argentina sida cad u qalmo.
“Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican caalamka, wuu u qalmaa Ballon d’Or,” ayuu Ibrahimovic u sheegay BeIn Sport.
“Waan ogayahay inuu ku guuleystay dhowr jeer laakiin wuu u qalmay. Wuxuu u ciyaaraa sida inuu PlayStation yahay, waa wax aan la rumeysan Karin. Dadka dhahaya uma qalmo waxba kama garayanaan kubada cagta ama waxay u hadlayaan micno darro.”
Ibrahimovic ayaa sidoo kale amaan kala dul dhacay ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee Real Madrid Zinedine Zidane, wuxuuna halyeeyga Faransiiska ah ku sheegay mid aan nuuciisa la helin.
“Markii uu Zidane garoonka soo galo, 10ka ciyaaryahan ee kale waaba fiicaanayaan. Waana wax iska fudud.
“Wuxuu ahaa mucjiso. Wuxuu ahaa ciyaaryahan aan nuuciisa la helin. Wuxuu ka fiicnaa ciyaaryahan kasta, wuxuu ka yimid caalam kale. Ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin la mid ayey noqonayaan marka uu garoonka ku jiro. Waa ciyaaryahan sameyn kara farqi aysan ciyaartoyda kale sameyn Karin.
“Ma garanaayo hadii aan arki doono ciyaaryahan la mid ah. Taasi waa fikradeyda. Dadka kale wey ka dhiiban karaan fikirkooda, sidoo kale ana waxaan ahay ciyaaryahan wanaagsan.”
Caasimada — Mogadishu.